Ibhedi yeLaurium yeManor Inn yezeMbali kunye neGumbi lesidlo sakusasa #7 - I-Airbnb
Ibhedi yeLaurium yeManor Inn yezeMbali kunye neGumbi lesidlo sakusasa #7
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguJulie
Eli gumbi #7, nto leyo 1 of 11 amagumbi iindwendwe ezikhoyo kwimbali Laurium Manor Inn Bed & Breakfast. Ibekwe kumgangatho we-3, ekuqaleni yayiyenye yamagumbi omkhonzi. Ukusonga kwiveranda engaphambili kunye namagumbi amaninzi aqhelekileyo ayafumaneka ukuba wonwabe.
Nokuba ufuna ukuphumla kwisitulo esinezitebhisi eziziimitha ezili-100 zeveranda enekomityi yeti kunye nesnack esandul' ukubhakwa (izincomo zababuki zindwendwe bakho), shona kwilayibrari yerocker ngencwadi elungileyo, okanye ukonwabele omnye wemidlalo emininzi ekhoyo. kwigumbi lethu lebhola - indlu yethu ineendawo ezininzi eziqhelekileyo ukuze iindwendwe zethu ziphumle. ILaurium Manor Inn yakhiwa ngo-1908; Ekuqaleni yayilikhaya le-copper baron, ukusukela oko yabuyiselwa kwihotele enkulu yembali - ukwamkela iindwendwe ukusukela ngo-1989. Injongo yethu ibikukudala ihotele ye-boutique edibanisa ezona nkonzo zintle ezivela kwiihotele kunye nobutofotofo be-B&B. Ukuhlala kwegumbi lakho kubandakanya ukhenketho lwendlu ekhokelayo kunye nesidlo sakusasa se-buffet esigcweleyo, esiqhutywa kwigumbi lokutyela eLaurium Manor Inn ukusuka nge-8-10 am (Meyi-Oct) kunye ne-8: 30-10: 30 am ngexesha leenyanga zasebusika (Nov - Epreli). Indawo yethu ibonelela ngobuninzi bayo yonke imisebenzi yasehlotyeni nasebusika ukuba uyonwabele, ke yiza ukuzonwabisa nathi!
Iintsuku eziyi-7 e Calumet Township
4.88 · Izimvo eziyi-76
ILaurium yilali ezolileyo esembindini wePeninsula yaseKeweenaw. Indawo egqibeleleyo esembindini yokukhangela indawo. Ilali yezeMbali yaseCalumet ikumgama nje weemayile zokutyela, iivenkile zekofu, iigalari zoBugcisa, iivenkile zezipho kunye neKeweenaw National Historic Park.